Isdilidda | Suomen Mielenterveysseura
SOS-Xarunta ee Suomen Mielenterveysseura waxay muddo 40 sano ah ku hawlaneed sidii looga hortagi lahaa isdilidda. Macluumaadka la ururiyay marka la eego, badanaa waa laga hortagi karaa isdilidda. Hase yeeshee haddii qofku isdilo, waa in la fahmaa in ay tahay go’aan uu gaaray ayna habboon tahay in ehelkiisa ay aqbalaan xaaladdaas.
Finland caddadka isdilidda muddooyinkii ugu dambeeyay wey yaraadeen iyo weliba si furan ayaa looga wadahadlaa marka loo eego markii hore. Si kastooy ahaataba isdiliddu waa masiibada ugu weyn ee bini’aadanka taasoo bulshadeenu u baahan tahay loo horumarin lahaa loogana hortaggi lahaa isdilidda.
Haddii aad ku fikireyso isdilid
Ka hadal fikirkaada. Cid aad kala sheekeeysato waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan teleefanka dhibaato ka caawinta, xarumaha caafimaadka, xarumaha caafimaadka shaqaalaha iyo ardayda ama rugta caafimaadka dhimirka ee dagdagga ah. Tukinet waad ku qori kartaa cabashadaad khaaska. Waxba ha labashakin haddii aad u baahato caawimo u doono rugta caafimaadka dhimirka ee degdegga ama xarumaha caafimaadka.
Waa kuu furan yihiin dhammaan caawimaadda. Tusaale ahaan sida cawinaadda wadahadalka ee dhanka cilmi nafsiga ama daaweynta ee la xiriira fikirka isdilka ee ka dhasha niyadjab aan daryeel oo helin.
Iskuday inaad ka fikirto mustaqbalka, ka fikir hal maalin, hal sitimaan, bil, sanad iyo wixii lamid ah ee horeeya. Maalin maalmaha ka mid ah firkrkan isdilka wuxuu noqdaa inta badan mid la soo dhaafay.